Maitiro Ekudzora Yako Smart Smart Kubva kuApple Kurumidza Zvirongwa - WebSetNet
Maitiro Ekudzora Yako Smart Smart Kumba kubva kuApple Kurumidza Zvirongwa
3 Min Verenga
Chimwe chezvikonzero chikuru nei vanhu vachipinda mune smart home tech zviri nyore. Zvakanaka kuti ukwanise kubatidza mwenje kubva pafoni yako, asi zvinogona kuomera, futi. Neraki, Android inoisa zvidzoreso zvemuchina muPurani Zvirongwa pani.
Android 11 yakaunzwa nyowani yemagetsi meseji ine mukana wekushandisa smart smart zvishandiso zvemumba. Android 12 yakachinja zvachose izvozvo uye ndokufambisa madhairekitori kuIye Kurongeka Zvirongwa. Izvo zvinoisa madhairekitori ezvinhu zvakaita semarambi uye ma thermostat mumumvuri wekuzivisa.
RELATED: Maitiro Ekudzima iyo Mic uye Kamera kubva kuApple's Kurumidza Zvirongwa
Zvirongwa zvinoda kutsigira iyo Dhijitari Dhairekitori ficha kuti ioneke mune Yekukurumidza Zvirongwa tile. Panguva yekunyora, iyo hombe app inotsigira chimiro iri Imba yeGoogle. Iwe unozofanirwa kuve neyako smart smart zvishandiso akawedzera kuGoogle Home app nokuti izvi zvinoshanda.
Chinhu chekutanga chatinofanirwa kuita kufambisa iyo Dhairekitori Yekutonga mataira mukati meKurumidza Maseru. Svetera pasi kaviri kubva pamusoro pechidzitiro chako cheApple uye tora penzura pendi kuti urongedze maratidziro ematera.
Iwo mataira ari kumusoro chikamu ari munzvimbo Yekukurumidza Maseru nzvimbo. Rova zvakasimba pasi kune chikamu chepasi uye uwane iyo "Dhizaini Yekutonga" tile. Tinya ubatisise wobva wadhonza mataira kuenda kunzvimbo yepamusoro. Simudza munwe wako kuti udonhedze tile.
Tinya museve wekumashure mukona yekumusoro kuruboshwe kana wapedza.
Tevere, tsvaira pasi kamwe kana kaviri - zvinoenderana nekwaunoisa mataira - uye tepa iyo "Dhizaini Yekutonga" tile.
Iwe unogona kana kuti usingaone zvimwe zvekushandisa zvekushandisa zvatove nevanhu pachiratidziri ichi. Kana iwe uchida kuwedzera zvimwe zvishandiso zvemumba zvakanakisa pane ino menyu, tinya iyo matatu-matatu menyu icon mune yepamusoro-kurudyi kona uye sarudza "Wedzera Kudzora."
Apa ndipo paunogona kusarudza zvese zvishandiso zvaunoda kuti zvioneke mumenyu. Tinya "Sevha" kana wapedza.
Kana iwe uine imwechete yakatsigirwa smart imba app yaiswa, iwe unongoona chete zvishandiso kubva kune iyo app. Nekudaro, kana iwe uine vamwe pane yako nharembozha yeApple, unogona kubata "Ona Zvimwe Zvirongwa" pazasi.
Sarudza imwe yeapps kuti uwedzere kutonga kubva pairi.
Iwe zvino uchave nemukana wekusarudza zvishandiso zvakare, ino nguva kubva kune rakasiyana app.
Paunenge uine zvekushandisa zvekushandisa kubva kune akawanda maapplication, iwe uchaona yekudonhedza-pasi museve kumusoro kweanodzora skrini. Tinya izvi kuti uchinje pakati pemapurogiramu.
Chinhu chekupedzisira kuziva maitiro ekugadzirisa zvakare kutonga. Tinya iyo matatu-madota menyu icon mune yepamusoro-kurudyi kona uye sarudza "Hora Kudzora."
Kubva pane ino peji, bata uye bata kuti udhonze maitirwo uye wozodonhedza kana vagadziriswazve. Tinya "Sevha" kana wapedza kuronga patsva.
Ndo zvese zviripo kune ekushandisa ekudzora! Idzi switch dzinobatsira dzinogara dzichiwanika nyore kubva kuKurumidza Zvirongwa. Haufanire kunetseka nezvekuvhura iyo smart kumba zvishandiso Zvakare.
Samsung Galaxy S21 matipi uye manomano: Tenzi iyo S21, S21 + uye S21 Ultra
Android 12 "Snow Cone": Zvese zvatinoziva kusvika parizvino nezveGoogle inotevera inotevera gadziriso, ine Yekuvandudza Yekutarisa 1 shanduko!
Ongororo yeTile: Pro, Mate, Slim uye Sticker ichienzaniswa uye kuongororwa
Iyi ndiyo mitambo yakanakisa yaunogona kutamba pane Android
Nest Cam matipi uye manomano: Wana zvakanyanya kubva kuNest makamera ako
Apple AirTag vs Tile vs Galaxy SmartTag: Vateereri vanoenzanisa sei?
Copyright © 2021. Yakagadzirwa na Meks. Powered by WordPress.